Volvo – AutoMyanmar
Volvo က မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Polestar software upgrade ဟာတော့ All-wheel drive (AWD) Volvo ကားတွေရဲ့ နောက်ဘီးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမိုမြင့်မားစေပြီး မောင်းနှင်ရတာလည်း ပိုပြီးအဆင်ပြေလာအောင်ပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Polestar upgrade ဟာ Volvo all-wheel drive တွေရဲ့နောက်ဘီးစွမ်းအင်ကို ပိုမိုမြင့်မားစေရုံသာမက Steering ပိုင်းကိုလည်း ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Steering Wheel ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးထားတာမို့ အရှောင်အတိမ်းပိုင်းတွေမှာ ပိုမိုလွယ်ကူသွားမှာဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ Driving experience အသစ်ကိုခံစားစေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Volvo Cars ရဲ့ Research နဲ့ Development ပိုင်းမှာ Senior Vice President ဖြစ်သူ Henrik Green ဆိုသူက “ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ […]
၂၀၁၈ နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ Volvo
Premium Car Maker ဖြစ်တဲ့ Volvo ဟာတော့ ၂၀၁၈ နှစ်တစ်ဝက်အတွင်းရောင်းချနိုင်မှု ရလဒ်အခြေအနေကောင်းမွန်နေကြောင်းကို တရားဝင်ကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစီးရေ 317,639 စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ရလဒ်ဟာ အရင် ၂၀၁၇ ကထက် ၁၄.၄ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဝက်တုန်းက 277,641 စီးသာရောင်းချနိုင်ခဲ့တာပါ။ Volvo ဟာသူ့ရဲ့အဓိက စျေးကွက်တွေဖြစ်တဲ့ Europe, China, US အပြင် အခြားသော စျေးကွက်တွေမှာလည်း ရောင်းချနိုင်မှုအတိုင်းအတာက ကောင်းမွန်နေတာကြောင့် ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကြေညာချက်အရ U.S စျေးကွက်မှာ ကားအစီးရေ 47,622 စီးအထိ ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး အရင် ၂၀၁၇ ကထက် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ U.S မာကတ် မှာဆိုရင် XC60 […]
Volvo ကားကုမ္ပဏီကတော့ Electrified performance အတွက် Polestar နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Polestar Engineered ကိုဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Premium sports ကားအမျိုးအစား S60 ကိုမချပြခင်တစ်ပတ်အလိုက ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်တီးထားတဲ့ Polestar Engineered ကတော့ နောက်လာမယ့် Volvo ရဲ့ 60 series T8 Twin Engine plug-in hybrid ကားအမျိုးအစားတွေမှာ ထည့်သွင်းသွားဖို့ ဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ Polestar Engineered ဆိုတာဘာလဲ ? Polestar Engineered ဆိုတာကတော့ Volvo ကားတွေအတွက် update တစ်ခုပါ။ System ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို တိုးမြှင့်မှုတွေပြုလုပ်ပေးမယ့် Software update တစ်ခုလိုပါပဲ။ နာမည်ကြီးကတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတာကြောင့် နာလည်ရအနည်းငယ်ခက်နေသလို ဖြစ်နေတာပါ ?) ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ Polestar […]
Premium ကားကုမ္ပဏီ Volvo ရဲ့ မေလအတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင်းအားအခြေအနေကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကထက် ၁၃.၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီလကနေ မေလအထိဆိုရင် အရင်နှစ်ကထက် ၁၃.၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ U.S မှာတော့ Volvo ကားအရေအတွက် ၉ ထောင်ကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက် ၅၀.၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိရောင်းအားမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ U.S မာကတ်မှာဆိုရင်တော့ Volvo ရဲ့ SUV တွေဉီးဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Volvo ရဲ့အကြီးဆုံး မာကတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တရုတ်မှာတော့ အစီးရေ ၁ သောင်းကျော်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် ၈.၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်မှာထုတ်လုပ်မှုအများဆုံး Volvo ကားတွေကတော့ XC60 နဲ့ S90 မော်ဒယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Europe မာကတ်ပါ။ Europe မာကတ်မှာဆိုရင် Volvo ရဲ့ကားအစီးရေ […]
Volvo အနေနဲ့လာမယ့် နွေရာသီအကုန်နားလောက်မှာစတင်ရောင်းချမဲ့ Sedan အမျိုးအစား S60 ကစပြီး နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်ကားတွေမှာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကိုအသုံးပြုသွားမဟုတ်ကြောင်းကို ပြီးခဲ့ရက်ကပဲ တရားဝင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင်တွေ့မြင်ရမယ့် S60 Sedan ကားဟာ ဒီဇယ်အင်ဂျင်အသုံးမပြုထားတဲ့ ပထမဆုံး Volvo ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Volvo ရဲ့ Long-term plan (သို့) Electrification strategy ကိုရောက်ရှိဖို့ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ ကားတစ်စီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Electrification strategy အရ Volvo ဟာ ၂၀၁၉ ကစတင်ပြီးဖြန့်ချီမယ့်ကားတွေကို ဒီဇယ်အမျိုးအစားပုံစံဖန်တီးတော့မှာမဟုတ်ပဲ Mild petrol hybrid, Plug-in petrol hybrid (သို့) Battery electric vehicle အစရှိတဲ့ အမျိုးအစား Vehicle တွေကိုသာဉီးတည်ဖန်တီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။ အနာဂတ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Volvo ရဲ့ president နဲ့ chief […]